Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Kitapo fitiliana an-trano COVID-19 an-tapitrisany no tsaroana tany Etazonia
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Kitapo 2,212,335 eo ho eo novokarin'ny orinasa biotech any Aostralia Ellume ary zaraina any Etazonia dia mety mampiseho valim-panadinana SARS-CoV-2 diso.
Ny US Federal Food and Drug Administration dia namoaka fampahatsiahivana maika ny kitapom-panadinana an-trano COVID-19 diso.
Ny kitapom-panadinana an-trano notsiahivina dia mampiseho valiny COVID-19 diso 'avo kokoa noho ny azo ekena'.
Ny fitsapana izay mamantatra ny proteinina coronavirus, dia nahazo alalana hampiasa vonjy maika avy amin'ny FDA tamin'ny taon-dasa.
'Kilasy tadidiko' ho an'ny haingana malaza an-tapitrisany Kitapo fitiliana COVID-19 ao an-trano dia navoakan'ny US Federal Food and Drug Administration (FDA).
Araka ny FDA, 'karazana fampahatsiahivana lehibe indrindra' dia navoaka noho ny kitapo fitsapana COVID-2,212,335 19 novokarin'ny orinasa biotech any Aostralia. Ellume, ary zaraina any Etazonia, dia mampiseho valim-panadinana SARS-CoV-2 diso 'avo kokoa noho ny azo ekena'.
Nampitandrina ny mpandamina federaly amerikana fa ny fampiasana kitapo tsy mety dia "mety hiteraka voka-dratsy ara-pahasalamana na fahafatesana."
Ny fitsapana antigène, izay mamantatra ny proteinina coronavirus, dia nahazo alalana hampiasa vonjy maika avy amin'ny FDA tamin'ny taon-dasa. Azo alaina tsy misy prescription ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy roa taona no ho miakatra, ary mampiasa santionany swab nalaina tamin'ny orona mba hamantarana raha misy COVID-19.
Ny sasany amin'ireo "loty manokana", novokarina teo anelanelan'ny Febroary sy Aogositra tamin'ity taona ity, dia tsaroana any Etazonia ankehitriny, miaraka amin'ny orinasa nilaza fa niara-niasa tamin'ny manampahefana izy ireo mba hanesorana an-tsitrapo ireo fitsapana voakasika amin'ny tsena.
Ny orinasa dia nanolotra ny fialan-tsiny "noho ny adin-tsaina na ny fahasahiranana mety hitranga [ny mpanjifa] noho ny vokatra tsara diso."
Ny valiny diso 'avo kokoa noho ny azo ekena', izay mampiseho fa voan'ny coronavirus ny olona iray raha ny marina dia tsy izany, dia notaterina tamin'ny FDA tamin'ny tranga 35 farafahakeliny. Tsy misy valiny ratsy diso hita.
Na izany aza, ny diagnostika tsy marina dia mety hiteraka voka-dratsy mahafaty. Mety hahazo fitsaboana diso na tsy ilaina ny olona iray, anisan'izany ny fitsaboana antiviral sy antibody, ary hiharan'ny ratram-po fanampiny noho ny tsy maintsy mitokana amin'ny fianakaviana sy ny namana.
Mety hitarika amin'ny tsy firaharahan'ny olona ny fitandremana, anisan'izany ny fanaovana vaksiny amin'ny COVID-19, hoy ny FDA.